के तपाईं दुई वर्षभित्र आफ्नो फोन ‘रिसेल’ गर्न चाहनुहुन्छ? आइफोन नै किन्नुहोस् - kageshworikhabar.com
१५ कार्तिक, काठमाण्डौ। कुनै फोन बजारमा आएको १२ देखि २४ महिनाभित्रमा त्यसको मूल्य घट्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। युकेबाट प्रकाशित उक्त रिपोर्टअनुसार आइफोन १२ प्रो बजारमा आएको ६ महिनामा यसको मूल्य कायम राख्ने सन्दर्भमा उत्कृष्ट फोन थियो। यसको मूल्यमा केवल ३२ प्रतिशतले मात्र ह्रास आएको थियो।
एप्पल र साम्सुङका साथै गुगल, वानप्लस र हुवावे फोनमा पनि उपभोक्ताले कति रकम घाटा व्यहोर्नुपर्छ भनी रिपोर्टमा उल्लेख छ।रिपोर्टअनुसार लन्च भएको २४ महिनापछि वानप्लस फोनको मूल्य ७८ प्रतिशतले घट्छ भने गुगल पिक्सेल फोनको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्छ। त्यस्तै, एपल, साम्सुङ, वानप्लस र गुगल फोनको दाँजोमा हुवावे स्मार्टफोनको मूल्य छिटो घट्ने रिपार्टले जनाएको छ।
Previous articleभाइटीकाको साइत सार्वजनिक, कति बजे छ शुभ साइत ?
Next articleतपाईं जुन तरिकाले श्वास फेर्नुहुन्छ, तपाईं सोही अनुरूप सोच्नुहुन्छ
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले तीन महिनामा कमायो ९ अर्ब डलर नाफा